Wonderful Andersen e Sosnovy Bor
City Andersen e Sosnovy Bor uvele hhayi kudala, eminyakeni engu-30 nje edlule. Isizathu sokuba ukwakhiwa walo wawenziwe esenzeka ngalo umlobi odumile Hans Christian Andersen, ogama udumo futhi yaqanjwa leli zwe elihle futhi emuhle ebuntwaneni, ubuciko imidlalo.
City Andersen e Sosnovy Bor - lokhu kuyindlela ezithakazelisayo futhi engavamile ukuchitha impelasonto nayo ingane. Indawo mayelana 2 hectares yamisa idolobha langempela, okuyinto isiqiniseko ukujabulisa hhayi kuphela izingane kodwa futhi kubantu abadala. Ngaphakathi kukhona ezihlukahlukene enkulu izibalo esibonisa izinhlamvu kusuka ozithandayo inganekwane.
Andersen e Sosnovy Bor - wangempela edolobheni lwasemaphusheni, lapho kukhona into ukubona. On insimu yalo ungabona edolobheni ngempela ihholo umbhoshongo, okuvimbezela, umbhoshongo Tin Soldier, Little Mermaid lesikhumbuzo futhi eziningi izakhiwo ezithakazelisayo. Futhi esiqiwini kuyinto yaseshashalazini ehlobo, esiteji okuvame elibamba imikhiqizo zezingane. Relax and abe isidlo, abadala kanye nezingane kuzoba cafe "The Little Mermaid."
Andersen edolobheni fairytale of Sosnovy Bor lihlotshiswe ngemifanekiso eminingi ezimibalabala, yasezindongeni, ibala amafasitela ahlotshiswe ngokweqile. decor abathandwayo futhi enhle unezela isimo kumnandi futhi ikuvumela ukuba shí ezweni ebuntwaneni. Ophahleni lwezindlu nemibhoshongo ehlotshiswe amathayili enhle imibala isitini futhi ehlotshiswe vanes sezulu. ezitsheni Beautiful ngakwenza yensimbi izibalo sizobonisa ngqo isiqondiso umoya nganoma yisiphi isikhathi. Ngesikhathi umbhoshongo eHholo Town zitholakala kulawa mahora, futhi edolobheni kumnandi has izibhamu ayo, Umhubhe komhlaba uma kwakhiwa ibhuloho elibanjwe.
Andersen e Sosnovy Bor liyaziwa party izingane agqamile kumnandi futhi ukusebenza, zazo zikhona kuze 300 ngonyaka. Zonke imisebenzi kukhona imvelo zemfundo kanye zentuthuko. Basuke okuhloswe ngaso ovukayo isithakazelo zezingane in umdwebo, imidlalo yaseshashalazini, umculo, kanye phezu jikelele imfundo yobuhle. Izivakashi ziyakwazi ukubona iqhaza emikhosini grand, imidlalo yaseshashalazini, amakhonsathi omculo futhi ukusebenza ekuseni, SMME kanye yokuzijabulisa. Ensimini ka edolobheni kumnandi izingane akhiwa endleleni wangempela esiteshini igesi. Izingane ukwazi ukukhwela Scooters kanye amabhayisikili.
Pho-ke, abantu abadala kanye nezingane Ungathola Andersen e Sosnovy Bor? Izindleko ngokuvakashela idolobha fabulous ngeke ukhokhiswe. Ungathola kukhona, Bor Pine engakafiki nganoma iyiphi indlela elula. Itholakala ngqo emigwaqweni yedolobha phakathi Solar futhi 50 Okthoba.
Lapho sivakashele umuntu Sosnovy Bor kungenzeka ezinye umehluko wemisindo nemiqondo yamagama. Leli dolobha lisendaweni endaweni umngcele futhi etholakala eduze ezinkulu yokusebenza amandla enuzi. Ukuhamba lapha idinga pass.
Ngakho-ke indlela lula futhi ngokushesha ukuze uthole Andersen? Indlela ukuya edolobheni kumnandi? Ngemoto udinga ukushayela bebheke Sosnovy Bor phezu ePeterhof onguthelawayeka. Lo mgwaqo efanayo kungenziwa inombolo Shuttle 401, okuyinto isuka metro station "Avtovo". Eyesibili inketho - ukuqeqesha nge aseBaltic Isiteshi sesitimela. Kuyadingeka ukuba athole 'Kalishche "esiteshini, lapho №5 ibhasi iya Sosnovy eBor.
Rolls of Pita isinkwa iresiphi
Isiqu sawo ebhayisikili: incazelo, izinhlobo, izici kanye nokubuyekeza